LYRICS: Obibini - Lemme Know ft. A.I – PlugTimes.com
Home/Entertainment/LYRICS: Obibini – Lemme Know ft. A.I
Obibini’s ‘Lemme’ Lyrics
The lyrics to Zylofon Music rapper Obibini’s ‘Lemme’ song featuring A.I has been made available to make fans and the general public sing and rap along perfectly.
VERSE 1 – Obibini
Me dɔ wiase, wo shine sɛ chrome
Wo nti me nam a, m’abati nam wiem tesɛ drone
Girl, you know say you bad to the bone
Ebe you you for dey at the side of my throne
Sexy, I dey thirst more
You be Pepsi, mechecke wo sɛ chessboard
My mattress broad
Stretche wo legs or better yet fa me chest na reste, stress gone!
Wode rent ka a, bille me na m’ɛtua quick
Louis Vuitton shop, nea wopɛ biaa, pick!
Me, I don’t think you’re beautiful, you’re beyond it
Kɔm de me na me hu wo a, me wurafi m’aduane
W’anwaa me a, mendɔ obiaa, menbɔ wo dua
Ɛba no ɔdɔ nsɛm a, I be senior (Abyssinia), Ethiopia!
Meda a menna, insomnia
M’ayɛ sɛ nsuom nam
Sɛ meyɛ Shrek a, woyɛ Fiona!
CHORUS – A.I
Just lemme know, Finna get you home
Me a me hwɛ a, I like
Na me pɛ wo no oo, waa de ne nti no oo
Ɔbaa, deɛ nti na yentumi – Yes, mene wo!
Hemaa, w’awie n’ɛda
Ɔbaa, fatwi me a m’antwi me
Mma nso me, saa wo deɛ, n’ɛfa!
Obiaa ne wo mpere ho, woa ne woara (Goddamn right)
Ɛyɛ wei na me gyidi su yi! Woara (Yɛnnyɛ ntɛm)
Ɔde ade n’agye me sei, Woara! (Goddamn right)
VERSE 2 – Obibini
Mɛdɔ wo a’a kosi infinity
Mene wo tesɛ gutter ne impurity
Wonni hɔ a, asɛ rubber bi kyekyere me ti
Kyerɛ me son ne me daughter what’s humility
Eii, woyɛ sexy, I’m inquisitive
Wo nante a, Lord have mercy, me sen primitive
Wo deserve designers, no nudity
Sɛ ɛyɛ cash a no doubt, frɛ me Menzgold u see!
Medɔwiase, w’adwen n’aben
Mehu wo a, na me rushe, adrenaline
I’m the type to go asking, m’ase w’amen?
Shorty, mɛma kɔm ade wo deɛ, adɛn?
Ahomateaa donko, mesi bar tonko
When I go see your mommy, your poppy and uncle
Sɛ ɛyɛ Mampong, Akuapem anaa Konongo
M’ayɛ krado sɛ padlock, ɛnyɛ me long!
HOOK – A.I
Oh my word, ɔbaa
Hold it right there, ɔhemaa
Deɛn na ɔɔka, gyae ma wɔnka
He don’t wife em’ so
Wonteano nti no, ɔse Ayisi amma anka
Wɔde me ayɔ, abufuo nti no
W’agyae mehɔ, sesei nti no
Wɔnse ɛdeɛndeɛn, hwan na wɔɔboa
Hwan n’ɛpɛ, monnyae mo ntoatoa
M’ahunu mu dɛ ma m’aso asisi
Efie me fie, mesua biibi
Daa wonekrɔ hemaa, woa ne woara
Bra ma yɛntena! ɔde ade n’agye me sei!